Allegro Integration - Manomboka mivarotra amin'ny Allegro miaraka amin'ny Propars E-Ihracat!
Mora ny mitantana ny fivarotanao Allegro miaraka amin'ny Propars!
Manomboha mivarotra any Allegro miaraka amin'ny Propars, ary ny vokatrao dia amidy any Polonina!
Ny e-export dia tena mora tokoa amin'ny fampidirana Propar allegro!
Ny baikon'i Allegro dia voaangona amin'ny efijery iray ihany miaraka amin'ireo baiko hafa rehetra.
Azonao atao ny mivarotra ireo vokatra ampidinao ao amin'ny Propars amin'ny alàlan'ny tsindry tokana.
Ny tsenan'i Polonina Allegro no mpitarika tsy azo iadian-kevitra amin'ny tsenan'i Eoropa Atsinanana ary mpilalao vaovao amin'ny tsenan'i Eoropa. Allegro dia lasa iray amin'ireo tsena an-tserasera 10 lehibe indrindra eran-tany, taorian'ny fivoarany lehibe tamin'ny vanim-potoana farany.
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny Allegro ho an'ny mpivarotra dia ny isan'ny mpivarotra ampiantranoiny. Na dia eo aza ny isan'ny mpampiasa mavitrika mihoatra ny 24 tapitrisa isan'andro, ny tahan'ny mpivarotra eo amin'ny lampihazo dia ambany lavitra noho ny mpifaninana aminy. Midika izany ny fifaninanana maivana kokoa ary tombony bebe kokoa ho an'ny mpivarotra.
Na dia manana endrika tsena eo an-toerana aza i Allegro, dia sehatra iray tena mahazatra maneran-tany, indrindra any Eoropa Atsinanana.
Any amin'ity faritra ity izay mbola tsy tafiditra tanteraka amin'ny sehatra lehibe hafa, Allegro dia fantsona fivarotana tena niche.
E-Commerce izao dia tsy maintsy ho an'ny orinasa rehetra. Amin'ity tranga ity, tsy tokony hamela ny e-varotrao rehetra mifamatotra amin'ny sehatra na tranokala tokana ianao. Na dia mandray an-tanana ny lokomotif aza ireo goavambe eran-tany, dia misy tsenam-barotra matanjaka amin'ny faritra. Iray amin'izy ireo i Allegro.
Any Polonina ny foibeny, ity tsena ity dia afaka manolotra modely fidiram-bola vaovao ho an'ny orinasanao. Ankoatra izany; Ity tsena ity, izay saika amidy avokoa ny vokatra rehetra ary tsy dia betsaka loatra ny isan'ny mpivarotra, dia manana fidiram-bola bebe kokoa noho ireo tsena lehibe 5 ao Torkia fotsiny.
Anjaranao ny mampivelatra ny tambajotra e-export anao amin'ny alàlan'ny fandraisanao ny toeranao amin'ity tsena manokana ity. Ny hany ataonao dia ny manatona ny solontenan'ny Propars. Ny Propars dia mpiara-miombon'antoka amin'ny vahaolana amin'ny Allegro any Torkia ary manome fanohanana anao amin'ny raharaha rehetra ilainao.
Manondro ny fampidirana Allegro
Fiaraha-miasa sy fampidirana Propars-Allegro; Izany dia ahafahanao manomboka mivarotra mora foana amin'ny Allegro. Miaraka amin'ny interface tsara an'ny Propars, azonao atao ny manampy an'i Allegro amin'ny tambajotram-pivarotanao rehefa mitantana sehatra manerantany miaraka amin'ireo fivarotanao an-tserasera any Torkia.
Ao Allegro, poloney ny fitenin-drazany, azo atao ny mivarotra raha tsy amin'ny fahalalana Tiorka, miaraka amin'ny tontonana Propars. Alefaso any amin'ny tontonana Propar ny vokatrao ary amidio mora foana amin'ny Allegro. Fanampin'izay, hadika amin'ny teny poloney ny mombamomba ny vokatrao ary hapetraka ho azy eo an-toerana ireo singa fandrefesana ny vokatrao.
Azonao atao ny mijery ny baikonao avy amin'ny Allegro amin'ny tontonana tokana ary mamoaka e-faktiora amin'ny tsindry tokana.
Ankoatr'izay, raha tsy manana fivarotana ao Allegro ianao, ny ekipa Propars dia manokatra ny fivarotanao Allegro maimaimpoana amin'ny anaran'ny orinasanao!